(GOOS-GOOS +SAWIRO) Man Utd oo heerka labaad u dirtay Aston Villa – xili Marcus Rashford uu geesiga ciyaarta ahaa | Haqabtire News
(GOOS-GOOS +SAWIRO) Man Utd oo heerka labaad u dirtay Aston Villa – xili Marcus Rashford uu geesiga ciyaarta ahaa
United ayaa awood dheeri ah kusoo gashay kulankan iyadoo Memphis Depay iyo Juan Mata ay fursado badan abuureen intii ay ciyaaarta soctay, laakiin Alan Hutton oo ah daafaca kooxda Aston Villa ayaa ku dhibtooday inuu celiyo weeraryahanka Manchester United Marcus Rashford.
Idrissa Gana iyo Jordan Ayew ayaa kubad weyn isku dhufsaday, laakiin ma aysan dhaafin daafaca kooxda Manchester United.
FURSAD QAALI AHEYD
7 daqiiqo: United ayaa ku guuleysatay in ay abuurto kubad dhanka geeska uu ka keenay Antonio Valencia lakiin Mata oo isku day wanaagsan sameeyay waxaa ka kansalay mardambe daafaca Villa Hutton.
16 daqiiqo: waxaa si wanaagsan u dhaqaaqay Rooney, laakiin tani uma sahlin in hogaanka uu ugu dhiibo kooxdiisa waxaana ka qasaariyay Marouane Fellaini .
GOAL! MAN UTD 1-0 ASTON VILLA (Rashford 32)
United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta ka dib markii Antonio Valencia uu kubad joog hoose ku keenay si wanagsan uu u dhameystiray Marcus Rashford,da’yarkaan ayaa kubada ka hoose dusiyay goolhaye Brad Guzan.
kooxda Manchester United ayaa intaas kadib sameysay dadaalo badan,oo ay hogaanka ku dhareysan kartay qeybtii hore basle ma aysan usuura gelin waxaana qeybta hore ay kusoo dhamaatay 1-0 oo ay hogaanka ku hayeen kooxda United.
soo laabashada qeybta labaad labada koox ayaa sameeyay dadaalo badan lakiin waxaa ay ahaayeen kuwo qasaray.
Villa weeraryahankeeda Rudy Gestede ayaa sameeyay isku day wanaagsan lakiin kubadii uu sameeyay waxaa mardambe dilay xiddiga garabka kaga ciyaara Aston Villa ee Kieran Richardson.
Markale fursad qaali ah waxa qasaariyay! Ayew oo kubada jawi hooseysa ah ku tuuray shabaqa Manchester United inkastoo ay ku sii dhacday Gestede ,waxaa si wanaagsan kubadaasi isugu qaboojiyay goolhayaha Manchester United.
guu ahaa ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 1-0 , waxaana ku badiyay kooxda Manchester United oo hadda hal dhibic usoo jirsatay kooxda kalainta afaraad ee Manchester City oo la ciyaareysa caawa Chelsea.